यी हुन्, दशवर्षे माओवादी जनयुद्धका मुख्य घटना – Everest Dainik – News from Nepal
यी हुन्, दशवर्षे माओवादी जनयुद्धका मुख्य घटना
काठमाडौंः दशवर्षे जनयुद्धका समयमा घटेका मुख्य घटनालाई यहाँ बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ-
० फागुन १– नेकपा माओवादीद्वारा ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं’ भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको शुरुवात । रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठविसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरु र गोरखाको च्याङलीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा ।
० फागुन ६– नेकपा (माओवादी ) का महामन्त्री क‍. प्रचण्डद्वारा एक प्रेस वक्तव्य मार्फत् ती कार्वाहीहरुको जिम्मेवारी स्वीकार ।
० बैशाख २४– रुकुमको तकसेरामा प्रहरी विरुद्ध पहिलो सफल एम्वुस । दुई प्रहरीको मृत्यु र दुईवटा राइफल कब्जा ।
० असार– माओवादीको के‍.स.को बैठकले ‘छापामार युद्धलाई विकासको अर्को नयाँ उचाइमा उठाऔं’ भन्ने मूल नारासहितको तेस्रो योजना पारित ।
० भदौ– तनुहुँको कालिकाटारमा प्रहरी गस्तीमाथि छापामारहरुद्वारा आक्रमण र हतियार कब्जा ।
० माघ २२– धादिङको खहरेमा एम्वुस । दुई राइफल र वीस लाख रुपियाँ नेपाल वैंक लिमिटेडको कब्जा ।
० फागुन २४– रोल्पाको कोर्चावाङ निम्रीमा प्रहरीविरुद्ध एम्वुस । दुई प्रहरीको मृत्यु र दुईवटा राइफल कब्जा ।
० चैत ४– गोरखाको सौरपानीमा एम्वुस । तीन प्रहरीको मृत्यु र एक राइफल कब्जा ।
० बैशाख – तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले ‘सबैलाई मार, सबै चीज जलाऊ र सबै चीज लूट’ को किलो शेरा टू नामक क्रूर अपरेशन सञ्चालन । प्रहरीद्वारा यो अपरेशनको क्रममा पाँच सय जनताको हत्या ।
० भदौ– नेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित वैठक सम्पन्न । ‘आधार इलाका निर्माणको दिशामा अघि बढौं !’ भने मूल नारा तय ।
० कार्तिक १०– छापामारहरुले सल्यानको झिम्पे टावर सुरक्षार्थ रहेको प्रहरी चौकी कब्जा । पूर्वमा काभ्रेको फलाँटेमा दिउँसै प्रहरी चौकी कब्जा । सोही दिन पर्साको निर्मलवस्ती र धनुषाको ललियामा रहेका चौकीहरु कब्जा ।
० पुस १८– २०५३ पुस १९ गतेको वेथान कार्वाहीको वीरताको निरन्तरताको क्रममा ललितपुरको भट्टेडाँडा चौकी छापामारहरुद्वारा सम्पूर्ण हतियारसहित कब्जा । सोही घटनाको सचित्र समाचार प्रकाशन गरेवापत पुरानो सत्ताद्वारा जनादेश कार्यालयमा आक्रमण । कम्प्युटरलगायत प्रेस सामाग्री लूट, कार्यालय तालाबन्दी र जनादेशका तत्कालीन सल्लाहकार शक्ति लम्सालसहित सहकर्मीहरु गिरफ्तार ।
० चैत्र ५– काभ्रेको अनेकोटमा सेल्टर लिइरहेका सात जना कलाकारहरुको प्रहरीले आगो लगाएर जिउँदै जलाएर गोली प्रहार गरी हत्या । सो वलिदानी दिनको सम्मानमा चैत्र ५ लाई साँस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाइन्छ ।
० जेठ ६– नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र शर्मा, जनादेशका प्रवन्ध सम्पादक मिलन नेपाली, पूर्वका छापामार प्लाटुन कमाण्डर नवीन गौतम र कमला शर्मा लगायतलाई गिरफ्तार गरी बेपत्ता । त्यसबेलादेखि पुरानो सत्ताले नागरिक बेपत्ता पार्न शुरु गर्यो र आजसम्म १५ सयभन्दा बढी बेपत्ता छन् ।
० जेठ ३१– जाजरकोट लहुँमा रहेको दङ्गा वेस क्याम्प कब्जा ।
० भदौ २३–नेकपा (माओवादी) का वैकल्पिक पोलिटव्यूरो सदस्य सुरेश वाग्ले वासुको गोरखामा गिरफ्तारपछि हत्या ।
० फागुन ६– रोल्पाको घर्तीगाउँ दङ्गा इप्रका कब्जा । यसपछि प्रहरीहरु केन्द्रीकृत ।
० चैत्र अन्त्य– गोरखाको हर्मी प्रहरी चौकी कब्जा
० असार १९– जाजरकोटको पाँचकटिया इप्रका कब्जा ।
० फागुन– नेकपा (माओवादी) को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न । प्रचण्डपथ पारित । अध्यक्षमा क।प्रचण्ड निर्वाचित । दक्षिण एसियाली फेडेरेशनको अवधारणा पारित । ‘आधार इलाका र स्थानीय सत्ता सुदृढ र विस्तार गरौं ! केन्द्रीय जनसरकार निर्माणको दिशामा अघि बढौं !!’ भन्ने मूल नारा तय ।
० चैत्र १९– रुकुमको रुकुमकोटमा रहेको दवाकोट क्याम्प, दैलेखको नौमुलेमा रहेको प्रहरी क्याम्प र दोलखाको मैनापोखरीमा रहेको इप्रका कब्जा ।
० असार ३०– रामेछापको धोवीडाँडा प्रहरी चौकी कब्जा ।
० साउन १२– कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अग्निप्रसाद सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी रहेको तीन सदस्यीय माओवादीका वार्ता टोली कीर्तिपुरमा सार्वजनिक ।
१४ गते पहिलो चरणको वार्ता गोदावरीमा । २८–२९ गते दोस्रो चरणको वार्ता बर्दियाको ठाकुरद्वारमा ।
० मंसिर ६– अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पुरानो सत्ताले वार्ता र अग्रगामी राजनीतिक निकासको ढोका बन्द गरेको जनाउँदै सचेत रहन जनसमुदायमा आग्रह ।
० मंसिर ११– देउवा सरकारद्वारा संकटकालको घोषणा । शाही सेनाको औपचारिक परिचालन । शाही सुरक्षाकर्मीले जनादेश साप्ताहिक र जनदिशा दैनिकका कार्यालयमा रेड गरी ११ जना पत्रकार गिरफ्तार ।
० मंसिर १२– शाही सेनाद्वारा भीषण अपरेशन शुरु । जताततै गिरफ्तारी, धरपकड, हत्या र राज्यआतंक ।
० मंसिर २२– शाही सेना र प्रहरीको हत्या, गिरºतारी र राज्यआतंकविरुद्ध नेकपा (माओवादी) द्वारा नेपाल बन्द ।
० फागुन ४– जनसेनाद्वारा अछाम सदरमुकाम र साँफेबगर एयरपोर्ट कब्जा । भिडन्तमा ५५ शाही सेना र १५० प्रहरीको मृत्यु ।
० वैशाख १९– रोल्पाको लिस्ने लेकमा शाही सेनासँग जनसेनाको दिउँसै भीडन्त । जनसेनाद्वारा बलियो अमेरिकी फोर्टिफिकेशनसहित बनाइएको गाम संयुक्त शाही सुरक्षा वेस क्याम्प कब्जा ।
० जेठ १३– जेठ ६ गते गिरफ्तार गरिएका जनादेशका पूर्व सम्पादक कृष्णसेनको हिरासतमै कुटीकुटी हत्या ।
० भाद्र २३– अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धीखर्क र सिन्धुलीको भीमानमा रहेको इप्रका कब्जा ।
० माघ १८ – बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रामबहादुर थापा बादल, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र मातृका यादव रहेको पाँच सदस्यीय माओवादी वार्ता टोली घोषणा ।
० वैशाख १४– दोस्रो युद्धविरामको पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौंको शंकर होटलमा । २७ गते–सोही ठाउँमा दोस्रो चरणको वार्ता ।
० साउन ३२– पुरानो सत्ता र नेकपा (माओवादी) बीच तेस्रो चरणको वार्ता दाङ हापुरेमा । सोही दिन रामेछापको दोरम्बामा शाही सेनाद्वारा जिल्ला जनसरकार प्रमुख बाबुराम तामाङसहित २० जना माओवादी कार्यकर्ता र एक स्थानीयको हत्या एवम् शाही सेनालाई ब्यारेकबाट पाँच कि‍.मि.भन्दा वाहिर ननिस्कन भएको सहमतिलाई तोडिएकाले वार्ता प्रभावित ।
० भाद्र १०– नेकपा (माओवादी) द्वारा युद्धविराम र वार्ता भएको घोषणा । देशव्यापी प्रतिरोध कार्वाही शुरु । काठमाडौंमा जनसेनाद्वारा शाही सेनाको कर्णेल किरण वस्नेतको सफाया ।
० कार्तिक ११– पोखरा नजिकैको डाँडानाकामा रहेको संयुक्त चेकपोष्ट कब्जा ।
० कार्तिक २१– नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष क.चण्डद्वारा एक विशेष सन्देशमार्फत् रेडियो जनगणतन्त्र नेपालको उद्घाटन ।
० मंसिर– नेकपा (माओवादी) र एमालेबीच भारतको लखनउमा वार्ता ।
० माघ १६– तमुवान स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार घोषणा, प्रमुखमा देव गुरुङ ।
० माघ १९– किरात स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा, गोपाल खम्बु प्रमुख ।
० माघ १०– मधेश स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा, प्रमुखमा मातृकाप्रसाद यादव ।
० चैत्र १३– नेकपा (माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वी कमाण्ड इञ्चार्ज क।किरण भारतीय प्रहरीद्वारा सिलगुडीमा गिरफ्तार।
० असार ३— अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा शिक्षण हडतालसहित विविध सशक्त संघर्ष गरेर शाही सत्तासँग संगठनमाथिको आतंककारीको आरोप फिर्ता गराउन सफल ।
० साउन÷भदौ– माओवादीको केन्द्रीय समितिद्वारा ‘प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं ! वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक तयारी गरौं !!’ भन्ने मूल नारासहितको प्रत्याक्रमणको योजना पारित ।
० भाद्र २०– माओवादी केसद्वय शेरमान कुँवर र मोहनचन्द्र गौतमको सिरहामा हत्या ।
० मसिर २– बाँकेको खैरीखोलामा धरापमा परी ८ शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु । सबै हतियार कब्जा ।
० मंसिर ५– नुवाँगाउँ–थवाङ–चुनवाङ शहीद मोटरबाटो खन्ने अभियान उद्घाटन ।
० पुस ३– काठमाडौंको साँखु इप्रका जनसेनाद्वारा कब्जा ।
० फागुन १– माओवादीका अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा देशभरिका जनगणतन्त्र रेडियोमार्फत् पहिलोपल्ट श्रव्य सम्बोधन ।
० असार ११– जनसेनाद्वारा अर्घाखाँचीको खनदहमा शाही सेनामाथि आक्रमण । लेफ्टिनेण्टसहित १९ शाही सेनाको मृत्यु ।
० असोज १८ नेकपा (माओवादी) द्वारा एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा ।
० मंसिर ७– सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी सार्वजनिक ।
० मंसिर १३– माओवादीद्वारा केन्द्रीय समिति वैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक । प्रत्याक्रमणको दोस्रो योजनाको घोषणा– ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ फौजी कार्यनीति बनाएको घोषणा ।
० मंसिर १४– शाही सेनाद्वारा हेलिकोप्टरबाट गोली हानी डिभिजन कमाण्डर क.किमबहादुर थापा (सुनिल) को हत्या ।
० माघ २६– माओवादी र सात दलको बहिष्कारका कारण कथित नगर निर्वाचन पूर्णतः ध्वस्त ।
० माघ २७– जनसेनाको पश्चिम सैन्य कमाण्डद्वारा रुपन्देहीको सुनवलमा शाही सेनाका पाँच ट्रक फोर्समाथि आक्रमण । २५ शाही सेनाको मृत्यु । भारी मात्रामा हतियार कब्जा ।
ट्याग्स: maobadi, war